Maamulka Galmudug oo ka jawaabay hadal shalay kasoo yeeray madaxweynaha Puntland (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka Galmudug oo ka jawaabay hadal shalay kasoo yeeray madaxweynaha Puntland (DHAGEYSO)
Maamulka Galmudug ayaa jawaab culus ka bixisay hadal maalintii shalay kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas, kaas oo ahaa in dagaalada Gaalkacyo ka soconaya laga soo abaabulo magaalada Muqdisho islamarkaana ay mas’uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya.
Mas’uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabeey oo maanta shirka jaraa’id ku qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa ka hadlay eedeymahaas dhan ee uu soo jeedinayo madaxweyne Gaas.
Wuxuu Mr Carabeey sheegay in C/weli Gaas uu hadalkaasi u yiri mid uu mar-marsiyo ugu raadinaayo gardaradda cad oo ay Puntland ka wado magaalada Gaalkacyo, islamarkaana uu ku diidan yahay in wada-hadal iyo heshiis laga gaaro colaadahaas.
“Puntland waxay marwalba ku meereysanaysaa inay taladda meel kale u rarto, iyadoo dagaalkaasi ku cambaareysa dowladda federaalka, marna Shabaab ku sheegeysa, arrimahaas oo dhan waxay caddeynayaan inaysan jirin rajo ay nabad ku imaan karto, hadalka C/weli Gaas-na wuxuu sidoo kale astaan u yahay inuusan raali ka ahayn in heshiis laga gaaro colaadahaas” Sidaas waxaa yiri Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabeey.
Dhinaca kale, wuxuu Mr Carabeey si cad u sheegay in Puntland ay mas’uul ka noqon doonto cawaaqib xumadda ka dhalata dagaalada iyo colaadaha ka jira magaalada Gaalkacyo.
“Cawaaqib xumadda ka imaan doonto dagaalada Gaalkacyo waxaa mas’uul ka noqon doonto Puntland, oo iyada diidan fulinta heshiisyadii hore laga gaaray colaada Gaalkacyo” Ayuu hadalkiisa raaciyay Mr. Carabeey
Ugu dambeyntii, madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabeey ayaa u sheegay beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya in Galmudug ay diyaar u tahay nabad iyo wada-hadal, balse ay dhinaca Puntland arrintu ka fadhiso.